Ịmafe si iPhone ka Android? Chọrọ mbubata niile ahụ dị oké egwu na iCloud / iPhone / iTunes ga-azọpụta ọhụrụ gị Android ngwaọrụ? Mma, ka m aka gị tupu, na na maka otutu nke hassle. Gịnị mere i nwere ike ịjụ? Ọfọn, n'ihi na otu onye, ​​e nweghị usoro nke ị nwere ike ozugbo mbubata music si iCloud ka Android. Ị ga-akpa ibudata niile gị iCloud music gị iTunes akaụntụ na mgbe ahụ jikọọ na ngwaọrụ gị gị na laptọọpụ / kọmputa, na-eji Google Music Manager nyefee niile na music ngwaọrụ gị site na-eso ọzọ set nke ntuziaka. Mgbe usoro a na-agụnye a otutu enweghị isi nbudata nke nwere ike na-a otutu oge, ọ bụ nnọọ kemmekpa na-eso. Nye onye a otutu enweghị isi software ma rịọ ya ka ikwunye na a otutu ngwaọrụ; M n'ezie adịghị mkpa akọwa n'uju na ọ ewetara ọdachi, na-eme m?
Ugbu a, na ị na-agaghị ọbụna na-ewere ndị n'elu kwuru banyere usoro na ị ka chọrọ chepụta ụzọ nyefee nile nke na oké ọnụ ahịa music. Wondershare MobileTrans Bụ ihe ngwa iji mee ka niile nke gị iTunes ka Android, iCloud ka Android na ọbụna iPhone ka Android enyefe nchegbu-free na-adaba adaba. Wondershare MobileTrans-ahapụ gị nyefee gị music dị nnọọ na-efu nke a click. Mgbe ọ dị mfe iji, ọbụna n'ihi na ndị mgbe gbalịrị ebufe music n'ofe ngwaọrụ tupu, ọ bụkwa free na atụmatụ nkwado maka fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ otu nwere ike iche. Ọzọkwa, Wondershare MobileTrans dị maka ma Windows na Mac ọrụ.
Nyefee music si iCloud ka Android dị nnọọ mfe iji MobileTrans. Iji malite,-eso nke a dị mfe usoro:
1. Download Wondershare MobileTrans site na njikọ nyere n'elu. Chere maka echichi mezue na-agba ya. Site na Ihuenyo, nbanye gị iCloud akaụntụ na iji Abanye menu.
2. Jikọọ na ngwaọrụ gị ka gị na laptọọpụ / kọmputa. Họrọ iCloud ndabere ka-amalite nbudata na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ site na gị iPhone gị laptọọpụ / kọmputa.
3. Ozugbo download zuru ezu, họrọ chọrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ site n'aka-ekpe n'akụkụ menu na iti "Malite Copy" nyefee ya ndị Android ngwaọrụ jikọọ gị na laptọọpụ / kọmputa.
Iji nyefee music si iTunes ka Android, nanị jikọọ na ngwaọrụ gị gị na laptọọpụ / kọmputa mgbe wụnye MobileTrans na-eso ntụziaka ndị a:
1. ndabere data si gị ochie ngwaọrụ site na-ahọpụta "ndabere" si n'ụlọ menu. Ego niile igbe na-ederịta akwụkwọ ozi data ị chọrọ ndabere. Pịa "Malite Copy" ka MobileTrans-eme ndị ọzọ.
2. Copy data gị ngwaọrụ ọhụrụ, ke idaha ihe gam akporo ngwaọrụ site na ịpị "Weghachi" nhọrọ dị na n'ụlọ menu. Họrọ chọrọ faịlụ site dropdown menu, gị iTunes ndabere faịlụ na nke a. Họrọ "Malite Copy".
Nyefee music si gị ochie iPhone ọhụrụ gị Android dokwara mfe na MobileTrans. Nnọọ na-eso ndị a dị mfe ntụziaka:
1. Run MobileTrans na gị laptọọpụ / kọmputa, si n'ụlọ menu họrọ "Malite" na mobile transfer windows ga-emeghe elu. Jikọọ ma ngwaọrụ gị (iPhone na Android) gị laptọọpụ / na kọmputa na site na ndepụta kpọrọ "Content Ka idetuo", họrọ "Music". Họrọ "Malite Copy".
2. The Iṅomi usoro ga-akpaghị aka na-amalite na a na-enwe ọganihu mmanya na Aga-egosi na pasent nke data na e depụtaghachiri. Chere maka mmanya iru ọgwụgwụ (100%). Jide n'aka na usoro na-adịghị etre ie ị na-adịghị gbanyụọ ngwaọrụ gị ma ọ bụ ọ na-adịghị mechie ruru ka ọ bụla batrị mbipụta wdg ka nke a pụrụ ịkpata ure / ọnwụ nke data.
Anyị dị nnọọ hụrụ otú MobileTrans na-eme ka-ebufe data si iCloud / iTunes / iPhone anyị Android ngwaọrụ enweghị ọtụtụ nsogbu. The mfe na ala nke usoro bụ ìhè na-achoghidi inwetakwu nkọwa. MobileTrans Ike ya mere, na-eji beginners na ahụmahụ ọrụ myiri. Ọ dị mkpa Otú ọ dị, iji mara ebe a na iCloud transfer-arụ ọrụ nanị maka Android igwe na version 4.2 na n'elu, iTunes version 11,3 na n'elu na iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9.
1. Na-aga site niile ntuziaka ọma, e dịghị mkpa iji ọsọ. Jide n'aka na ị na-aghọta na onye ọ bụla na ihe ọ bụla ụkwụ tupu ebu usoro si.
2. Mgbe niile na-a ndabere gị iCloud music bụrụ na ị na ọgbaghara ihe elu ma ọ bụ ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi na-atụghị anya.
3. Zere nbudata software si atọ ọzọ weebụsaịtị ọ bụrụ na ọ dị na ukara website; ọ pụrụ ịbụ na e tampered na na pụrụ ịkpata oké ego nke mmebi kọmputa gị / laptọọpụ.
> Resource> iCloud> otú nyefee Music si iCloud ka Android